Tolotra tsy azo soloina: $ 9 dia hanana an'io fanangonana biby mahafatifaty io ianao | Famoronana an-tserasera
Fifanarahana tsara amin'ny fonosana watercolor biby mahafatifaty - mitahiry hatramin'ny 68%
Efa ho iray volana lasa izay dia namoaka a tolotra tsy azo ovaina amin'ny fonosana vokan'ny lahatsoratra ho an'ny Photoshop. Androany dia manana iray hafa tena tsara miaraka amin'ny fanangonana sary an-tsary watercolor mahafatifaty miaraka amin'ilay feo mahafinaritra izay matetika tadiavintsika ho an'ny lohahevitra manokana.
Izahay dia miatrika fonosan-drano misy biby mahafatifaty izay Mampiavaka azy ireo singa sary 65 amin'ny endrika PNG ary manavaka izany sary tsotra izany, saingy afaka misarika ny sain'ny mpitsidika na mpamaky ny tranokalanay izany. Ary 9 $ ihany ny vidiny tohizo fantarina amin'ny antsipiriany eto ambany.
1 Biby mahafatifaty fanangonana loko watercolor
2 Fanangonana biby mahafatifaty watercolor: biby fiompy
3 Fanangonana biby an-dranomaso mahafatifaty - Vorona voninkazo miravaka
4 Fanangonam-bokatra mahafatifaty watercolor - Famoronana sy vazan-vazy lehibe
5 Fanangonana biby mahafatifaty watercolor - zavaboary sy singa an-dranomasina
6 Fanangonana biby mahafatifaty watercolor: atody paska
Biby mahafatifaty fanangonana loko watercolor
Tokony holazaina fa raha mahazo ny fanangonana biby mahafatifaty amin'ny loko rano ianao dia hanana eo alohanao ny kinova farany an'ny fonosana. Izany hoe, azonao atao ny mampiasa azy tsy voafetra na amin'ny manokana na amin'ny ara-barotra.
La Nastia Smiyan no namorona an'ity fonosana ity ary avy amin'ny tranonkalany ao amin'ny tsena Creative dia mampiseho ny talentany miaraka amina andiana fanangonana singa misy sary misy lohahevitra samihafa izy, na dia miorina tsara amin'ny loko rano aza; Ilay iray izay mitantana tsara ny singa roa izay ho hitanao amin'ny fanangonana biby mahafatifaty sy ny sisa tavela aminy ao amin'ny tranokala fivarotana.
Amin'ny ankapobeny dia handray soa ianao avy amin'ity rehetra ity:
Ny fisie rehetra dia ao anaty endrika PNG misy ambadika mangarahara mifanaraka amin'izany.
Ny rakitra tsirairay dia misaraka ao anaty rakitra iray.
Izy ireo dia nohamarinina tanteraka hampiasaina amin'ny Adobe Photoshop.
La karazana singa sary avy amin'ity fanangonana biby mahafatifaty ity dia ity:
Biby fiompy 19 miaraka amin'ny refy 1500-5000 teboka sy 300 dpi.
Seho voninkazo 12 haingon-trano (1000-2000 teboka; 300 dpi).
Joro vazy lehibe 4 (5000-5000 teboka; 300 dpi).
Fangaro 4 sy zoro afovoany misy refy 8000 x 4000 teboka: 300 dpi.
Singa sy zavaboary 15 amin'ny ranomasina ho fanampiny misy refy 3000 - 7000 teboka; 300 dpi.
Singa 11 amin'ny atody Paska toy ny fanampiny: 1500 - 3000 teboka: 300 dpi.
Araka ny efa nolazainay, raha mikasa ny hivarotra ireo singa sary amin'ny famoronana anao ianao, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana maharitra dia manan-jo hanao izany ianao. Misy kinova mahazatra, saingy voafetra ho 500 unit, ka raha tianao ho an'ny maso ivoho izany na ho an'ny asanao manokana ho mpamorona tsy miankinaManoro hevitra anao izahay mba tsy hanadino ity tolotra manokana ity miaraka amin'ireo sary hosodoko feno rano ireo.
Ny marina izay samy manana ny kalitao daholo izy rehetra ary izy ireo dia omena an'io fikasihan-tanana tadiavintsika io rehefa te-hanazava ny boky iray izahay, mamelona tranokala na bilaogy misy lohahevitra ho an'ny ankizy na te-hamorona eCommerce miaraka amina endrika vitsivitsy izay mahafaly ny mpitsidika fotsiny izahay; fa momba izay ihany, aza adino ireo singa web ireo amin'ny famolavolana.
Hodinihintsika tsirairay ireo singa sary an'io fanangonana loko rano ny biby mahafatifaty. Cuckoos no teny voafidy hanehoana ny maha-mpialokaloka sy fisakaizana ny tsirairay amin'ireo hita ao amin'ity fonosana ity. Ataovy.
Fanangonana biby mahafatifaty watercolor: biby fiompy
Smiyan dia mitondra andian-biby izay hita matetika any amin'ny toeram-piompiana ary afaka mamorona tranga isan-karazany izay ampitan'ny tantsaha amin'ny andavanandrony. Ondry bitro, gana, kisoa, akoho, akoho ary ilay ondry izay manana daisy mahafinaritra dia mampiseho ny lafiny mahasarika indrindra azy.
Andiam-biby misy sary hosodoko misy sary maneho ny tsy firaharahana, fahafinaretana ary ireo fotoana eny amin'ny toeram-piompiana izay matetika mitranga tsy misy fihenjanana sy faniriana hahafantatra ny fifandraisan'izy ireo.
Ny tahiry biby fiompy dia manana lehibe loko isan-karazany sy sary tsotra izay mampiavaka indrindra ny biby tsirairay izay mipetraka ao amin'ny toeram-piompiana dia miavaka. Io kisoa io sy ny lokony mavokely, niaraka tamin-dreniny foana ny gana, ny bitro ao ambadiky ny karaoty sy ireo ondry kely mampihomehy manana feo pastel tena mety aminy.
Io andian-dahatsary sary io no tena mpiorina an'ity fanangonana biby mandoko rano ity. Tsy misy tsy fahampiana ireo vola ireo amin'ny fanasan-damba izay mametraka ny fikitika manokana hitondra azy ireo any aminay miasa ny tranonkala na izay bilaogy misy lohahevitra ho an'ny ankizy.
sokajy misy sary 19 vita amin'ny watercolor izay hanananao raha mividy an'ity fanangonana ity dia ahena 68% ho an'ny fotoana.
Fanangonana biby an-dranomaso mahafatifaty - Vorona voninkazo miravaka
Amin'ity indray mitoraka ity, manaraka ny watercolor ho teknika lehibe amin'ity fanangonana ity, dia manana singa voninkazo mandalo voninkazo samihafa miaraka amin'ny lokony mena, mavokely, volomparasy ary mavo. Ary tsy banga maitso no tsy hita handravahana toerana vitsivitsy izahayb izay tianay hofenoina io toetra azo ampiharina sy tsotra io.
Misy singa 12 miaraka amin'ny 1000 x 2000 teboka refy hahafahanao mandrefy azy ireo araka ny itiavanao azy. Izy io dia sary tsotsotra tsy misy fandokafana be mba hahazoana bebe kokoa amin'ny foto-kevitra azo tsapain-tanana momba ny voninkazo amin'ny lokony samihafa toy ny tononkalo volomparasy, mena na manga.
Tsy misy holazaina intsony momba ireo singa voninkazo haingon-trano ireo, izay mety ho PNGnampiasaina tamin'ny fangaraharanao ary namorona ny setanay manokana amin'ny fampifangaroana maro amin'izy ireo. Fa kosa ity no ampahany amin'ity fanangonana biby mahafatifaty ao anaty loko rano ity.
Izao fotsiny ny mifantina mikasika ny famolavolana sy ny fahaizana mitambatra ireo voninkazo ireo ary mamorona haingo kanto izay toa tsara amin'ny toerana rehetra alefany sy hapetraka.
Fanangonam-bokatra mahafatifaty watercolor - Famoronana sy vazan-vazy lehibe
Ireo firafitra sy zoro ireo dia natao hampidirana ireo singa mahaliana sy manaitra isan-karazany. Araho ny hatsarana mitovy amin'ny fanangonana biby mahafatifaty iray manontolo amin'ny loko rano ka miaraka amina sary mora sy tsotra dia soloina avy amin'ny kanaria ka hatramin'ny atody Paska na gana aza.
Ireo fitambarana rehetra vita amin'ny ankamaroan'ny singa hitantsika amin'ny ambiny fonosana toy ny volomparasy, sampana maintso na ireo karazana bonika ireo. Tsy misy koa atody Paska tsy hita na cephalopod mahafinaritra iny amin'ny volomparasy.
Andian-dahatsoratra misy kalitao tsara izay iray manontolo ampio hatramin'ny totalin'ny 8. Ny refy dia manomboka amin'ny 5.000 teboka ka hatramin'ny 8.000 teboka. Izany hoe, azonao atao koa ny mampifangaro azy ireo amin'ny tsirairay mba hamoronana taratasy firakotra, ny fanasana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ilay zaza na koa ny fampakaram-bady raha haintsika ny mametraka azy tsara.
Fanangonana biby mahafatifaty watercolor - zavaboary sy singa an-dranomasina
Ary ny biby mandany ny fiainany any an-dranomasina na ny ranomasina dia tsy tokony ho diso amin'ity fanangonana biby mahafatifaty loko loko ity. Miresaka zavaboary an-dranomasina ihany koa isika sary tsara an'ity mpanakanto antsoina hoe Smiyan ity.
Tsy hahita zavatra hafahafa amin'izany isika vondrona misy singa 15 sy zavaboary ranomasina, miainga amin'ny atao hoe horita, trozona sperm, seahorse na clown trondro. Ity andiana zavaboary anaty rano ity izay tonga mba haneho tantara sy tantara maro. Mety tsy hahita karazana hafa isika na amin'ny karazana trondro na amin'ny loko, satria ny manga dia ampiasaina amin'ny loko samihafa.
Afaka niresaka momba izany isika foza, sifotra ary crustacea hafa izay mameno ny tany an-dranomasina amin'ireo rehetra hitantsika ato amin'ity lisitra ity ary mamorona fanangonana tsara mba hahafahantsika mampiasa azy ireo amin'ny asa samihafa. Na ahoana na ahoana, ny singa sary tsirairay ananantsika rehefa mividy dia manan-danja tokoa
Ao anatin'io lisitra io koa ireo mifandraika amin'ny tany mafana izay tsy mitovy amin'ny ambiny amin'ny fananana boloky, touchan, hummingbirds ary koa chameleon ary izay mety ho akorandriaka. Fenoy ity lisitry ny biby mahafatifaty ity mba hanana an'io repertoire io eo ambanin'ny fehikibo ary afaka mamaly ireo asa avy amin'ny karazana mpanjifa rehetra.
Fanangonana biby mahafatifaty watercolor: atody paska
Ary ho an'io daty manokana io, mikendry kokoa ny mpihaino Anglo-Saxon, ao amin'ity fanangonana biby mahafatifaty watercolor ity dia manana atody Paska isika. Ity andiany ity dia totalin'ny sary 8 izay miainga avy amin'ny atody Paska ny tenany ka mankamin'ny sobika ahazoantsika azy ireo.
Nisy sobika haingo isan-karazany tsara nampiana koa mahay mandravaka ny antony isan-karazany amin'ny paska toy ny karatra fiarahabana. Azontsika atao koa ny manambatra atody Paska amin'ny sobika tsy misy dikany mba hamoronana bebe kokoa ary hanome ny anjarantsika.
Tsy mora ny mahita singa an-tsary ny atody Paska izay tena izy ary manana ny tombo-kasany manokana raha toa ka misy io fanangonana io izay misy 8 ampiana ampiana refy amin'ny vahaolana izay mandeha manomboka amin'ny 1.500 ka hatramin'ny 3.000 teboka.
Raha fintinina, a fanangonana biby mandoko watercolor izay miaraka dia fividianana lehibe raha mandalo ny fividianana azy ianao. Indrindra fa ohatrinona ianao no afaka mihary hatramin'ny 68% amin'ny vidiny tany am-boalohany. Ary ho eny an-tananao ireo biby mahafatifaty hosodoko amin'ny loko rano ireo mba hanavahana ny tenanao amin'ny karazan'asa rehetra, na amin'ny Internet na raha tianao hatao pirinty amin'ny milina fanontam-pirinty.
Ka manana ianao eo an-tananao ny tolotra tsy azo lavina: fanangonana biby mahafatifaty watercolor amin'ny $ 9.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Fifanarahana tsara amin'ny fonosana watercolor biby mahafatifaty - mitahiry hatramin'ny 68%